» कसरी अन्तरिक्ष महाशक्ति बन्दैछ चीन ?
कसरी अन्तरिक्ष महाशक्ति बन्दैछ चीन ?
१७ पुष २०७६, बिहीबार ०६:००
चीनको मरुभूमी गोबीस्थित थुप्रै सेता भवन र डोमहरु देख्न सकिन्छ जसभित्र अन्तरिक्षयात्रीहरुका लागि अनुसन्धान र अध्ययन कक्ष सेवा रहेका छन् । यसले पनि अन्तरिक्ष महाशक्ति बन्नेप्रति चीनको दृढ चाहानालाई स्पष्ट पार्दछ । निजी चिनियाँ कम्पनी सी–स्पेसले निर्माण गरेको ‘मार्स बेस १’ अर्थात मंगल ग्रहको बेस, पृथ्वीको स्पेस स्टेसन जस्तै छ । यस भित्र हावा अवरोधकदेखि ग्रिनहाउस, ‘जिमनेसियम’ , मान्छे बस्नलाई क्वाटर र कन्ट्रोल रुम सबै छन् । यसरी उत्तरपूर्वमा रहेको यस गान्सु प्रदेशको जमिनी भूभाग धेरै हदसम्म मंगल ग्रहसँग पनि मिल्न जान्छ जहाँ चीनले अर्को वर्ष भ्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
ती बेस अवलोकन गर्न आउनेहरुले वास्तविक स्पेस मिसन कस्तो हुन्छ भनेर विशेष अनुभव लिन पाउँछन् जहाँ अल्ट्राभोइलेट प्रकाशदेखि स्पेस सुटसम्म उपलब्ध छ । यहाँसम्मकी अन्तरिक्षमा प्रोटिनका रुपमा सेवन गर्न खाद्य पदार्थ समेत उत्पादन गरिएको छ । त्यहाँ भ्रमणका लागि आएका एक १२ वर्षीय विद्यार्थी जाङ हुआन भन्छन्, “म यो ठाउँ हेर्न अत्यन्तै उत्साहित छु । यदि चीन मंगल ग्रहमा पाइला टेक्ने पहिलो मानिस भयो भने त्यसले देशभरका सबैलाई प्रेरित गर्नेछ ।” वास्तवमा चिनियाँ वैज्ञानिकहरु नै प्रारम्भिक रकेटका अग्रगामी मानिन्छन् । तरपनि तिनले १९७० मा मात्र रकेट लन्च गरेका हुन् भने २००३ पछि पहिलोपटक मान्छेलाई अन्तरिक्षमा पठाउन सफल भएका थिए ।
तरपनि अहिले चीनले एकदम छोटो समयमा धेरै प्रगति गरिसकेको छ । गत जनवरीमा मात्र छाङ इ लुनार ल्यान्डर चन्द्रमाको ध्रुवमा अवतरण गराएर चीनले नयाँ इतिहास रचेको हो । त्यसैगरी चीनकै जेड र्याबिट २ रोबरले स्याटलाइट मार्फत पृथ्वीमा डाटा संकलन गरि ल्याउन सफल भएको थियो जुन चन्द्रमाको वरपर स्थापित गरिएको थियो । यता पहिलोपटक अन्तरिक्षमा कपास उमारेर पनि चीनले नयाँ उपलब्धी हासिल गरेको हो । सो मिसनपछि राष्ट्रपति जिनपिङले यसले पूरै चिनियाँ पार्टीको शान बढाएको र सेना तथा जनताका लागि पनि उदाहरणीय साबित भएको उल्लेख गरेका थिए ।
यसरी सरकारबाटै ठूलो स्तरमा समर्थन प्राप्त गरेको चिनियाँ अन्तरिक्ष मिसनले आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न निकै जोड दिइरहेको छ । अहिले नै चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेडियो टेलिस्कोप निर्माण गरिसकेको छ । यस्तोमा चीन मंगल ग्रहको भ्रमण मात्र नभइ क्षुद्रग्रह, ‘जुपिटर’ र ‘युरानस’ मा पनि आफ्ना यानहरु पठाउन तल्लीन देखिएको छ । साथै यसले आगामी १० वर्ष भित्र चन्द्रमामा ‘साइन्टिफिक रिसर्च स्टेसन’ स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि सार्वजानिक गरिसकेको छ । नासाकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता केथी लोरिनी भन्छिन्, “उनीहरुसँग एकदमै योजनाबद्ध दिर्गकालीन लक्ष्यहरु छन् जसका लागि अहिलेदेखि नै तिनीहरु अत्यन्तै मिहिनेत गरिरहेका छन् र सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै गइरहेका छन् । ”
यति मात्र नभएर स्याटलाइट लन्च गर्ने कुरा पनि चीनको प्राथमिकतामा पर्दछ । गत वर्ष मात्र चीनले ३८ वटा स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको हो । यसरी पश्चिमसँग समान स्तरमा आउन चीनले धेरै प्रयास गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । गत महिना नै चीनले मोबाइल मार्फत पहिलोपटक ‘यल्लो सि’ समुद्रमा पाँच व्यवसायिक स्याटलाइट पठाएको हो जसमा अनुसन्धानात्मक प्रविधि जडान गरिएको थियो । यस्तोमा चीन समुद्रमा सफलतापूर्वक लन्च गर्ने अमेरिका र रुसपछिको तेस्रो राष्ट्र बनिसकेको छ ।
यसरी चीनले जुन गतिमा अन्तरिक्ष प्रविधिलाई अघि बढाइरहेको छ त्यसलाई सरकारले पनि आर्थिक वृद्धिका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिरहेको छ । तापनि अन्तरिक्ष महाशक्ति बन्ने बाटो चीनका लागि त्यति सहज भने छैन । यसअघि चीनका दुईवटा ठूला लन्च विफल भएका थिए । यसरी पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको दुरीमा रहेको मंगल ग्रहमा पुग्न अहिलेको समय सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । तरपनि यसअघिका विभिन्न मंगल मिसन विफल भएका छन् जसकारण चीनका लागि पनि मंगलको यात्रा चुनौतिमय हुनेछ । टाइमबाट